My Poem | The official site for MXG Abdibashir
Date: Sun Sep 24, 2000 3:50 amSubject: "Shiinley 3aad" about SL. politics!Asalaamu calaykumWalaalayaal waxan idiin soo gudbinaya gabay hal xidhaale siyaasadeed ah, oo kusaabsan halka uu marayo xaalka dalkeena iyo dadkeenu. Waa gabay "shiinley" ahoo la...
ShukriyeeyGabaygan waxa tiriyey Maxame xirsi Guuleed 1993. Waxanu u tiriyey Walaashii Shukri Xirsi guuleed oo inan yar ahayd markaa. Wuxu yidhi:-1. Shucarada aduunyadu markay gabay ku sheemayso2. Ninba wuxu shitaa meesha uu shiishku qaabiliye3. Markaasuu...
Qabyaaladda: Bal maxaa ikaa daba dhigay?Gabaygan waxa la tiriyey 19-02-03. Waxa tiriyey Maxamed Xirsi Guuleed. Gabaygani wuxu ka tarjumayaa dareen dhaba iyo duruuf jirta. Waa gar-naqsi aniga iyo qabyaalada na dhextaal. Waana dacwad u furan...
1.1. Wax badso wax beel bay dhashaaRiwaayadan waxa wada meteleya 8 qof oo kala ah 6 arday,hal macalin iyo hal waalid. Lixda arday afar way fiicanyihiin oo way dadaalaan labana waa saaqidiin. Marka labada saaqid u yimaadaan, waxay duufsanayaan ardaydii fiic...
1. Gabayga 1aadDate: Wed Mar 14, 2001 11:56 amSubject: "Burco Boodhlay" GabaySalaamada sxb dhamaantiinBeryahan danbe waxa batay soo hadal qaadka Burco iyo kaalinteeda bulsho,taariikheed, iyo siyaasadeedba. marar badan ayaan isku idhi malaha soo hadalqaadka...
SalaamaMaansadan waxa tiriyey Maxamed Xirsi Guuleed 07/07/1997 isagoo jooga dalka Swedan. Sidaan hubo laba tobnaadAnoo da,da sare ka marayAsseen soddon weli kamilinAyaan surmo oodan iyoKun saymiyo eed galeeSideetan qofkii jireeSiday dad la daaq lahaaMaxaa...
Anaw taliya Maanddeeq
Ina Cigaal: Anaw taliya Maanddeeq Asalaama calaykumWaxad moodaa inay bilaabantay tartamiddii madaxnimada ee Maandeeq. Waxad moodainuu nin waliba taagtii is muujinayo, kuwa kalena uu tamartii nusqaaminayo. Waxshalay iska caadi ahaa, ayaa maanta...
Helee bal maxaan hayaaba
Helee bal maxaan hayaaba 2003-06-26Hoheey maalmaha badhkoodHabeenka ayaa ka rooneMaxaan juun uuga heesi? Halkay i dhigtaan arkaayeMaxaan hambalyiyo bogaadinDadkayga u soo hibayn ba? Gumaysi markuu i heerayMarkuu heeryada i saaraykuwii heegada u fuulayInay...
Cabdilqaadiroow guul Allee roobka gabadhleeyey
Cabdilqaadiroow guul Allee roobka gabadhleeyeyEe guri Sanaagiyo ka da´hay gobolladii hawdkaGallad weeye eebuhu markuu goosto bixiyaayewaase dayr gabaabsiday hadeer goorta uu yimiyeGudban waa bishii loo yiqiin gacallehaygooweGadaal waxa ka raacaana waa...
Asalaama Calaykum, yaan sahaalo la moodin
Asalaama Calaykum, yaan sahaalo la moodin. Waxa tiriyey: Maxamed Xirsi Guuleed.Waxa ay maansadani ku jirtay riwaayadii; “Wax badso wax beel bay leedahay” ee uu alifay Maxamed Xirsi. Isla maansadan ayey riwaayadu ku furmaysaa. Isu daran diiriyaya shan...
FAJACAADGabaygan waxaa tiiriyey maxamed xirsi guuleed 18-07-94 wuxuuna kaga hadlayaa gabdhaha soomaaliyeed ee iskaga tegey dhaqankoodii ,xishoodkii iyo anshaxii fiicnaa ee hablaha soomaaliyeed lagu yaqaaney gaar ahaan kuwa jooga magaalada addis ababa ee...
Layga Sugi maayo
Layga Sugi maayoGabaygan waxa curiyey Maxamed xirsi Guuleed. Wuxu kaga hadlayaa dhaqamo isaga la xun balse ay dad badani hagaag moodaan. Maxamed wuxu tilmaamayaa inaan isaga marnaba laga sugayn dhaqamada noocaas ah. Wuxu yidhi: Soomaaliyeey qodobo aan...
Haddaan Anigu qaabayn lahaa…
Haddaan Anigu qaabayn lahaa…05/09/2001 Maxamed Xirsi.1. Haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qaybteene2. Qaxar iyo dhibaatiyo malaa qulub ma joogeene3. Qalalaase iyo may jireen qayla dhaantaniye4. Qab qab dhaafay waagii beryaba qiiq ma huriyeen5. Qabiil...
1. Gabayga 1aad Date: Mon Jul 9, 2001 6:50 pm Subject: Cigaal: Anaw taliya Maandeq(Gabay) Asalaama calaykum Waxad moodaa inay bilaabantay tartamiddii madaxnimada ee Maandeeq. Waxad mooda inuu nin waliba taagtii is muujinayo, kuwa kalena uu tamartii...
1 Maansadan waxa curiyey Maxamed Xirsi Guuleed 2000-12-26 maalin salaasa ah oo ramadaan tahay 30.
Maansadan waxa curiyey Maxamed Xirsi Guuleed 2000-12-26 maalin salaasa ah oo ramadaan tahay 30. Ducooy kaa baaqan maayoDigriyoow kuma baajinaayoDaneey marna kaama weyniInaan daa´inaw ku tuugoAnay ku jirtaa dantayduDaciifnimo aadmi baan ayInaan...
Intaasaan Alleyl kaa beryey
Intaasaan Alleyl kaa beryeyWaxa tiriyey tixdan Maxamed Xirsi Guuleed 31-01-2003. Wuxu yidhi:-Allahaw aduunyada intaan anigu sii joogoKollay waa ayaamee intaan iilka la´i geynineen laygu aabudhin xabaal layga imanaayoWaxan adiga kaa tuugayaa tuban...
Dal sifaynGabaygan wuxu tiriyey Maxamed Xirsi 1996 isaga oo jooga Sweden. nin ay saaxiib ahaayeen oo gabya ayaa soo waydiiyey bal inuu ka soo waramo meesha uu tegey. Dabadeed wuxu yidhi Maxamed Xirsi:Gabay waa mid kugu soo degiyo mid aad ku...
OORIWaxa gabaygan tiriyey Maxaned Xirsi Guuleed isagoo jooga wadanka Sweden 1995. Waxana ka soo codsaday gabay ku saabsan dhiirri gelinta guurka saaxiibkii Cumar C/laahi Yasir oo joogey markaa wadanka kanada. Wuxu yidhi:-1. Cumaraw astayn gabay baryahan...
Burco Boodhlay (1)
Burco Boodhlay (1)Salaamada dhammaantiinWaxan jeclaystay inaan soo gunaanado tixdii yarayd ee iga soo baxday ee raggaqaar ka cadhaysiisay. Waan ka xumay inaan dhasriyey hawlihii muhiimka ahaa eegolaha hor yaalay. Waan u cudur daaranayaa walaalah u arkay...
Bal maxaa i kaa daba dhigay? Jawaab
Maxamed Saalax wuxu yidhi:Mahad gaar ah Maxamed Xirsi, ma aha markii ugu horreysey een gabay kaaga ah dul imaado. Runtii waxaan qiray in aad gabay yaqaan tahay.malaha waad dhaxashay,malahayga dirka maanta kacay oo Qurbe iyo luqado jaan isu daba mareen ma...